Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mgbanwe ihu igwe bụ ihe iyi egwu nkwụsi ike ego US
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbanwe ihu igwe bụ ihe iyi egwu nkwụsi ike ego US.
Financial Stability Oversight Council na-achọpụta mgbanwe ihu igwe dị ka ihe na-apụta ma na-abawanye ihe iyi egwu na nkwụsi ike ego nke United States.
Financial Stability Oversight Council weputara akụkọ na ndụmọdụ gbasara ihe egwu ego metụtara ihu igwe.
Mgbanwe ihu igwe bụ ihe iyi egwu na -apụta ma na -abawanye na usoro ego America nke chọrọ ime ihe.
Akuko na ntụnye FSOC na-anọchite anya nzọụkwụ mbụ dị mkpa iji mee ka usoro ego anyị nwee ike ịnagide ihe iyi egwu nke mgbanwe ihu igwe.
Financial Stability Oversight Council (FSOC) ewepụtala akụkọ ọhụrụ na nzaghachi Onye isi ala Biden's Executive Order 14030, ihe ize ndụ ego metụtara ihu igwe. Na nke mbụ, FSOC achọpụtala mgbanwe ihu igwe dị ka ihe iyi egwu na-apụta na nkwụsi ike ego US.
Akụkọ ahụ na ndụmọdụ ndị so ya na-egosi nraranye FSOC n'ịkwalite na ịkwalite mbọ ndị dị ugbu a. mgbanwe ihu igwe site na ndụmọdụ ndị dị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị otu ka:
Nyochaa ihe egwu ego metụtara ọnọdụ ihu igwe maka nkwụsi ike ego, gụnyere site na nyocha ọnọdụ, wee nyochaa mkpa maka iwu ọhụrụ ma ọ bụ edegharịrị ma ọ bụ ntụzịaka nlekọta maka akaụntụ maka ihe egwu ego metụtara ihu igwe;
Kwalite nkwupụta metụtara ihu igwe iji nye ndị na-etinye ego na ndị na-ere ahịa ozi ozi ha chọrọ iji mee mkpebi ndị ziri ezi, nke ga-enyekwara ndị nchịkwa na ụlọ ọrụ ego aka ịchọpụta ma jikwaa ihe ize ndụ metụtara ihu igwe;
Welite data metụtara ihu igwe na-arụ ọrụ iji kwe ka nha ihe egwu dị mma site n'aka ndị na-achịkwa yana na ngalaba nkeonwe; na
Wulite ikike na nka iji hụ na achọpụtara ma jikwaa ihe egwu metụtara ọnọdụ ihu igwe.
"Mgbanwe ihu igwe bụ ihe iyi egwu na-apụta ma na-abawanye ụba nye usoro akụ na ụba America nke chọrọ ime ihe,” Odeakwụkwọ nke Treasury Janet L. Yellen kwuru. "Akụkọ na ndụmọdụ FSOC na-anọchite anya nzọụkwụ mbụ dị mkpa iji mee ka usoro ego anyị nwee ike ịkwado ihe iyi egwu nke mgbanwe ihu igwe. Usoro ndị a ga-akwado mbọ gọọmentị na-agba ọsọ ngwa ngwa maka mgbanwe ihu igwe ma nyere usoro ego aka ịkwado ngbanwe n'usoro, n'ụzọ akụ na ụba na-aga n'ihu na ebumnuche nke ikuku net-efu."
Ụlọ ọrụ Dan Pimental Financial Services ekwu, sị:
November 30, 2021 na 06: 16
N'ime akụkọ nke Onye isi ala Joe Biden nyere iwu, Council Financial Stability Oversight Council gbara ndị sonyere ahịa, ụlọ ọrụ ọha na ndị na-achịkwa iwu ka ha zụlite . Site n'onwe ha, ihe egwu akụ na ụba ma ọ bụ ego metụtara ihu igwe ekwesịghị imetụta nkwụsi ike ego; Akụ na ụba nwere ike nweta mbelata nke mmepụta.